केपी प्रचण्ड विबादको मारमा जिवराज आश्रीतको श्रीमती माया ज्ञवाली पनि, देखिइन् समानान्तर बैठकमा ? कसलाई मान्छिन् नेता ? दिइन् यस्तो प्रतिकृया – Gazabkonews
केपी प्रचण्ड विबादको मारमा जिवराज आश्रीतको श्रीमती माया ज्ञवाली पनि, देखिइन् समानान्तर बैठकमा ? कसलाई मान्छिन् नेता ? दिइन् यस्तो प्रतिकृया
काठमाडौं । राजनीतिक आन्दोलनमा संगै रहेका तत्कालिन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जिवराज आश्रीतको एउटै घटनामा निधन भयो । २०५१ जेठ ३ गते भएको रहस्यम दुर्घटनामा दुवै जनाको निधन भएको थियो । भण्डारीको श्रीमती विद्धा देवि भण्डारी अहिले मुलुकको राष्ट्रपति छन् तर आश्रीतको श्रीमती माया ज्ञवालीलाई भने बल्ल तल्ल समानुपातीक सांसद बनाइएको थियो ।
मदन भण्डारी र जिवराज आश्रीतको ठूलो राजनीतिक त्यागमा जिवित रहेको नेकपा अहिले विभाजन भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएपछि आधिकारिक धार कुन हो भन्‍ने बहस अहिले चर्किएको बेला मायाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी छन् ।
ओली समुह र प्रचण्ड नेपाल समुहले समानान्तर बैठक गरेका छन् । बैठकमा बोल्नेले आफ्नो पक्ष आधिकारिक भएको तर्क पनि प्रस्तुत गरिरहेका छन् । राजनीतिमा धेरै सकृय नदेखिने माया भने ओली पक्षले गरेको बैठकमा सहभागी भइन् ।
ओली पक्षको भेलामा सहभागी भएकी जीवराज आश्रितकी पत्‍नी माया ज्ञवालीले ओली नै कम्युनस्ट आन्दोलनको मूलधार भएको दाबी गरेकी छन् । लामो समय राजनीतिमा उनी ओझेलमा परेकी थिइन् । ७४ को निर्वाचनपछि समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् । नेकपा विवादमा अहिले उनी ओली समूहमा लागेकी छन् ।
सत्ता गलत मान्छेको हातमा पुग्यो, ओली–विद्याको कदमले संविधानको चिरहरण गर्‍यो : झाँक्री
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०की केन्द्रीय सदस्य एवं विघटित प्रतिनिधि सभाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सत्ता गलत मान्छेको हातमा पुगेको बताएका छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै नेकपा नेतृ झाँक्रीले यस्तो बताएकी हुन् ।उनले ओली र विद्याको प्रतिगामी कदमले संविधानको चिरहरण गरेको बताएकी छन् ।
झाँक्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जनमतको अपहेलना गरेको समेत आरोप लगाएकी छन् ।
यो कदमलाई संविधान विरोधीको डिजाइमा गरिएको ‘कु’को संज्ञा दिँदै यसका विरुद्ध सम्झौताहीन संघर्ष गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ । यस्तै, २०५९ देखि २०६३ सम्म कहिल्यै नखोसिने लोकतन्त्रको लागि लडेको स्मरण गर्दै नेतृ झाँक्रीले सत्ता गलत मान्छेको हातमा पुगेको उनले टिप्पणी गरेकी छन् । यस्तो छ उनको ट्विट
शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ पिपलाडीका मीना डगौरालाई घरायसी खर्चका लागि अहिले अरुकहाँ हात फैलाउनु परेको छैन ।